Baarlamaanka Galmudug oo doortay Madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa – Kalfadhi
Xildhibaanada Baarlamanka Galmudug, ayaa manta madaxweynaha maamulkaasi u doortay Axmed Cabdi Kaariye “Qoorqoor”, kaddib markii uu helay 66 cod.
Tirada xildhibaannada manta soo xaadiray kulantii Baarlamaanka ayaa dhammaa 77 xildhibaan. Ilaa 4 musharax ayaa u tartameysay doorashada, halka saddex musharax oo kale ay horay u diideen in ay ka qeyb-gallaan doorashada.
Musharixiinta Afarta ahaa ee ku tartamay doorashada ayaa waxaa ay codadka u kala heleen sidan.
1: Axmed Cabdi Kaariye ( Qoor Qoor) 66 Cod
2 : Axmed Cabdullaahi Samater. 9 Cod
3: Cabdiraxman Aadan Sabriye 1 Cod
4: Axmed Shire Maxamed (falagle) 1 Cod
Guddoomiyaha Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo natiijada ku dhawaaqay ayaa shaaciyey in xilka Madaxweynaha Galmudug uu ku guuleystay Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor).
Dhinaca kale, Madaxwayne ku-xigeenka Galmudug, ayaa waxaa loo doortay Cali Daahir Ciid oo ku guuleystay 46 Cod, halka musharaxii la tartamayay oo ahaa C/qaadir Sh Cali Diini uu helay 31 Cod.
Dowladda Mareykanka oo war soo saaray, ayaa sheegay in ay u hambalyeynayaan madaxweynaha loo doortay maamulka Galmudug.
Senator Axmed Macalin “Waa in la joojiyaa colaadaha ka taagan duleedka Kismaayo”